Semalt: Inona no atao hoe Spam amin'ny anaran'ny ILoveVitaly amin'ny Google Analytics?
Ny areti-panahin'ny spam-n'i spam sy ny fitsabitsaboana azon'ilay World Wide Web dia misy malware vaovao - ILoveVitaly. Tahaka ny vidim-panafody, darodar, blackhatworth, ary cenoval, ity spam referans ity dia misy paikady hamoronana endritsoratra sandoka. Manana ny kaontinao Google Analytics amin'ny fomba maro izy ary manandrana manamboatra fifamoivoizana maro amin'ny alalan'ny ID ianao. Ny tanjon'izy ireo dia ny hampihena ny fitokisana amin'ny tranokalan-tserasera amin'ny aterineto sy ny fanatanterahana ireo karazan-javatra mampiahiahy.
Raha mikaroka Bing, Yahoo na Google ianao, dia mety mahita tatitra an-jatony an'arivony amin'ny tranonkala manana rohy sy spam, ary miova isan'andro ny angon-drakitra. Tsy mety ny milaza fa saika ny tranonkala rehetra dia miady ho an'ny vahaolana farany, satria tiany ny hanafoana ny spam referral faran'izay haingana.
Nik Chaykovskiy, mpitantana ny fahombiazan'ny Customer Success of Semalt , dia manome vahaolana amin'izany eo amin'io lafiny io.
Fampidirana ny ILoveVitaly Spam
Raha jerena ny voalaza etsy ambony, dia hanolotra fampidirana fohy ny spam ILoveVitaly izahay. Betsaka ny adihevitra mipetraka mikasika ny fomba hanakanana ireo rohy mampiahiahy sy mampidi-doza. Hevitra maro samihafa no natao tao amin'ny aterineto. Soa ihany, nampiditra paikady roa i Google mba hanesorana spam referral avy amin'ny kaonty Analytics, nefa tsy manelingelina ny isa ao amin'ny motera .
Tsy teny filamatra vaovao ny spam referral, araka ny fanazavana omen'ireo manam-pahaizana azy imbetsaka tao anatin'ny volana vitsivitsy..Raha ny tena izy dia endrika spam izay misy fikasana isan-karazany manasongadina pejy web. Ny hackers dia miezaka manindry ny kaontinao Google Analytics hanimba ny laharan'ny toerana misy anao ary hanatsara ny laharan-dry zareo manokana amin'ny valin'ny fikarohana.
ILoveVitaly dia mampiasa ny ID mpanaraka anao amin'ny fandefasana angona manokana ao amin'ny kaontinao Google Analytics. Ity ID ity dia ahitana viriosy sy malware maro ary eo no eo mba hampihenana ny kalitao amin'ny votoatin'ny tranonkalanao.
Ankoatra izany, ity spam ity dia manitsaka ireo mpampiasa ary mahazo azy ireo ho voafandrik'ireo asa mampiahiahy isan-karazany, mitarika azy ireo hanindry ny rohy maloto. Matetika, ny rohy amin'ny Affiliate Amazon dia toerana ahafahanao misambotra amin'ny spam ILoveVitaly.
Tsy mampidi-doza ve ny tranoko?
Tsy mety ny miteny fa ny sazy ara-panadinana dia manimba ny tranokala sy ny bilaogy rehetra. Mamela ny fiantraikany ratsy amin'ny tatitra Google Analytics izany, ary hijery ny fijery diso ao amin'ny kaontinao ianao. Ny filazanao azy amin'ny Google dia tsy ampy satria tsy maintsy mamorona filtre koa ianao. Ny rohy spamming dia mety hanimba ny kalitao amin'ny fifamoivoizana, mamokatra be dia be ary mampitombo ny halaviran-tserasera. Azonao atao koa ny milaza fa mampidi-doza ny ILoveVitaly ho an'ny tranonkalanao ary tokony ho nesorina araka izay azo atao.
Ahoana no hanafoanana ny ILoveVitaly?
Raha tsikaritrao ny rohy momba ny spam sy ny referral ao amin'ny tatitra Google Analytics, dia tokony hiahiahy ianao fa ny fifamoivoizana mifototra amin'ny tranokalanao dia hosoka. Ny ady ara-pihetseham-batana ara-nofo dia tsy maintsy ilaina. Noho izany, tokony hijery ny politika sy ny toro-hevitra Google vaovao ianao mba handrafetana ny antontan-kevitra momba anao Source .